Global Voices teny Malagasy » Lasa tanjon’ny tovovavy any amin’ny faritra an-tendrombohitra avaratr’i Azerbaïdjan ny baolina kitra · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 07 Mey 2019 4:49 GMT 1	 · Mpanoratra Chaikhana.media Nandika Salohy Randriafanomezantsoa
Sokajy: Azia Afovoany sy Kaokazy, Azerbaijan, Fanatanjahantena, Mediam-bahoaka, Tanora, Vehivavy sy Miralenta
Manaitra izao tontolo izao ny ekipa zazavavy ao Shaki. Sary  avy amin'ny Chai-Khana.org.
Tantara  avy amin'ny Chai-Khana.org  ity lahatsoratra manaraka ity ary navoaka indray eto amin'ny Global Voices araka ny fifanarahana fiaraha-miasa. Avy amin'i Ayten Najaf sy Nurlan Babazade ny lahatsoratra sy ny lahatsary.
Nahamarika an'i Nahida ny Fikambanan'ny Baolina Kitra ao Azerbaijan tamin'ny farany ary nanomboka nilalao tao amin'ny ekipa nasionaly ho an'ny latsaky ny 17 taona  izy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/05/07/137686/
 ekipa nasionaly ho an'ny latsaky ny 17 taona: http://www.affa.az/index.php/news/u-17s-girls-squad-named-/63514